Anti anwụnta maka iOS na gam akporo mobile ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Anti Mosquito Free: chụpụ anwụnta na-akpasu iwe na picnic anyị
O meela ọtụtụ n'ime anyị n'oge ụfọdụ na ndụ, na anyị gara dịka ezinụlọ gaa nnukwu ụbọchị n'ọhịa (ma ọ bụ gaa n'akụkụ osimiri) yana nke kacha mma njem anyị, anwụnta na-ewe iwe na-amalite ịpụta na-eme ka anyị na-apụ n'anya fọrọ nke nta ozugbo si a dịruru ná njọ; Ọ bụrụ na iji ngwa, Anti Mosquito Free ị ga-enwe ohere ịchụpụ anwụnta ndị a n'ebe ị nọ n'oge ahụ.
Anti Mosquito Free bụ ngwa na-adọrọ mmasị nke ị nwere ike iwunye (maka oge) na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, nke na-egosi ha abụọ mbadamba dị ka ekwentị mkpanaaka. Tozọ iji ngwá ọrụ a bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara, ọ bụrụhaala na ị maara ugboro ole ị kwesịrị iji nwee ike ịme anwụnta ndị a, ha na-ahapụ gị ka gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị nọrọ ụbọchị ubi mara mma.
1 Olee otu Anti anwụnta Free na-arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo
2 A ụdị nke Anti anwụnta Free maka mobile ngwaọrụ na iOS
Olee otu Anti anwụnta Free na-arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo
Mbụ ị ga-aga Google Play Store iji budata, wụnye ma rụọ ọrụ Anti Mosquito Free; mgbe na ị ga na-achọ na akara ngosi na Ihuenyo mbu nke gị mobile ngwaọrụ, otú i nwere ike ozugbo enwe mmasị na interface na ngwá ọrụ a nwere. N'ime ya ị ga-enwe ohere nke họrọ ugboro ole ị chọrọ ịrụ ọrụ.
Nke ahụ bụ mgbe anyị ga-etinye obere aghụghọ ahụ, nke bụ nkwanye sitere n'aka onye nrụpụta ya. N'elu interface ị ga-ahụ bọtịnụ pụrụ iche atọ, nke akara dị iche iche dị iche iche na ị nwere ike iji n'oge ọ bụla. N'akụkụ ala ka enwere kama obere ihe mmịfe, nke ga - enyere gị aka ịkọwapụta ugboro ole aka ma ọ bụrụ na ịchọghị iji bọtịnụ ahụ n'elu.
Ntuziaka nke onye nrụpụta nke Anti Mosquito Free bụ na ị na-eji na 22 kHz, n'ihi na a ugboro bụ nke ga-eme ihe kacha mma ka mmenyenjo pụọ anwụnta si gburugburu ebe ị na-. Na ngosipụta video na Mmepụta chọrọ ị nwere ike na-enwe mmasị ihe ga-eme ma ọ bụrụ na a ala ugboro ole na-eji; Dịka ọmụmaatụ, etinyela ugboro ole ihe dị ka 15 kHz ebe ahụ, nke anyị nwere ike ịnụ n'ihi na ọ bụ n'ime ugboro ole ntị mmadụ nwere ike ijide. Ọ bụrụ na kama anyị jiri akara dị elu (dịka anyị kwadoro dị ka onye mmepe), ntị nke mmadụ anaghị anụ ụda ya n ’ụda kama ọ bụ naanị site na antennae na-anata anwụnta ndị a.
Ihe kachasị mma bụ na ngwa a na-egbochi mgbochi anwụnta na-agba ọsọ (n'azụ), nke pụtara na ọ ga-aga n'ihu na-ewepụta ụda na ugboro ole anyị họọrọ mgbe anyị na-arụ ọrụ na ngwa ekwentị ọ bụla anyị chọrọ.
A ụdị nke Anti anwụnta Free maka mobile ngwaọrụ na iOS
Ngwa anyị na-atụ aro n'elu ka a raara nye naanị ma rụọ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo; ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere otu na iOS (nke nwere ike ịbụ iPhone ma ọ bụ iPad) Anyị nwere ezigbo ihe ngwọta maka gị, otu ihe ahụ nke na-abịa na aha aha ya na Anti Mosquito Free mana ọ bụ nke onye nrụpụta dị iche.
Ị nwere ike budata ozugbo na Storelọ Ahịa Apple na ya na ihuenyo, ị ga-ahọrọ okirikiri bọtịnụ ebe anwụnta dị; ebe a ị nwere ike naanị họrọ n'etiti ugboro atọ a haziri na bọtịnụ ha, na-ahọrọ nke kachasị dị ka nkwenye nke onye nrụpụta nke ngwa ọrụ anyị kpọtụrụ aha n'elu. Na interface ị gaghị ahụ bọtịnụ na-agba ọsọ dị ka aro gara aga, ihe ị na-agaghị achọ iji ya n'ihi na ọ na-adị mma mgbe niile ịnwa iji ndabara na ntọala ndị nrụpụtara site n'aka onye nrụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Anti Mosquito Free: chụpụ anwụnta na-akpasu iwe na picnic anyị
Overwatch, a na-ekwe nkwa nzọụkwụ mbụ na Fps
Nyochaa FBX: 3D XNUMXD Scene na Object Player